Metrik Alaka: Tọghata, Too ma Sochie Mobile App Nkuchi | Martech Zone
Metrik Alaka: Tọghata, Too ma Sochie Mobile App Nkuchi
Metrik nke Alaka awade a n'elu ikpo okwu na-enyere gị na-emepụta eluigwe na ala njikọ nke na-enyere gị aka inweta mobile ngwa nkuchi organically. Ha nwere ike inyere gị aka:
Tọghata ndị ọrụ weebụsaịtị na ndị ọrụ ngwa, na-eji ibe ederede-m-the-app ma ọ bụ ọkọlọtọ ngwa ụwa niile
Nyere aka bulie ngwa gị site na Ozi Ntuziaka, ihe nkwado na nkwado.
Mee ka ngwa ngwa ngwa mkpanaka jiri nbanye akpaaka na ihe mgbakwunye.
Sochie usoro nnabata ngwa ngwa n'ụzọ ziri ezi site na ọwa, onye ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya.
Site na itinye na Alaka SDK n'ime ngwa iPhone ma ọ bụ gam akporo gị, Njikọ njikọ gafere na-ezo aka na data ihe omuma site na ịwụnye, na-enye gị ohere ịhazi ahụmịhe ngwa ahụ dabere na ebe ndị ọrụ gị si. Nwere ike ịmepụta nnabata ahaziri iche mgbe enyi gị zigara gị ma ọ bụ nye onyinye dị iche iche ntinye maka ndị ọrụ dị iche iche.
Ikpokoro na-enye gị nchịkọta ịkwesịrị ịkwalite mkpọsa ngwa ngwa gị site na iji ọwa niile na mmemme. Iji njikọ ngalaba nwere ike izipu ndị ọbịa weebụ na ọdịnaya gị na ngwa gị n'enweghị nsogbu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha enweghị ngwa ahụ arụnyere.
Tags: alakaalaka ụlọ ọrụalaka.io